Madaxweynaha Galmudug oo War kasoo saaray Dilka Taliyihii NISA – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka tacsiyeyey geerida taliyihii ciidanka Nabad-suggidda Magaalada Dhuusamareeb, Marxuum Qooje Cabdi Shiiqdoon, Kabtan Cabdixakiin iyo askartii kale ee ku shahiidday qaraxii maanta ka dhacay agagaarka Deegaanka Ceeldheer.
“Waxaan dhamaan Eheladii iyo Qoysaskii ay ka baxeen uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid Taliye Cabdirashiid Cabdi Shiiqdoon “Qooje” iyo Dhame Abdihakim Macalin mustaf iyo Askartii kalle ee ku shahiiday qaraxii, Khawaarijtu ey la eegteen” sidaa waxaa yiri Madaxweynaha Axmed Qoorqoor.
Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah uga tacsiyeynayaa ciidamada Nabad suggidda Galmudug iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida oo runtii ay ka baxeen saraakiisha iyo geesiyaashi geeriyootay.
Madaxweynaha ayaa intaa kadib u duceeyay in Eebbe janatul firdowsa ka waraabiyo shuhadadii ku baxday reer Galmudug iyo soomaaliba. Qabrigoodana Ilaah u waasiciyo.
Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada Qaraxii lagu dilay Taliyihii Ciidanka NISA ee Magaalada Dhuusamareeb iyo Ciidankii Ilaalada u ahaa oo xilligii la qarxinayay saarnaa gaari Cabdi Bile, iyagoona ku socdaalayay deegaanka Ceeldheer.